Author: Arashigami Gulkis
Posted by Diiwaanka Qosolka. See more of Diiwaanka Qosolka on Facebook. Hadaba halkan waxaa laga arki karayaa, in Hadalka isagoo isku micno ah, hadana sida loo kala dhigayo iyo Qofba Qaabka uu u sheegayo diiwaanka qosolka kala duwanaanayo.
Hadaba Boqoroow waxaan ka xumahay inay Riyaduna fasireyso arrin murugo leh. Waxan lagu dejiyay argada No 4 waxuu la kulmay magalda oo ifay so waxuu arkay magalda oo dhalaa lay so waxuu dhahay waad jogta maraykan ka waxuu radiyaya mesha lays ka dhiibo cabaar mar kuu so socday ayuu diiwaanka qosolka imaday is goska debka waxuu arkay diiwaanka qosolka dhalin yaraa ee mesha marayo waxuu dhahay saxibo mesha lays ka dhiibo djiwaanka sharciga laga qato ii shek in tuu qoslay ayuu dhahay saxib wax yar sug asxab badan buu u yeer tay wiil ki si lola qoslo diiwaanka dhahay maxad dhaday saxib waxuu ku celshay ii shek mesha lays ka dhiibo oo laga qato sharci dalkan diiwaanka qosolka ka.
Diiwaanka Qosolka updated their profile picture. Nin dhaliyaro ah oo reer hargeysa ah diiwaanka qosolka gaadhi yaroo reerkoodu lahaa kusoo qaaday seddex hablood oo jaarkooda ahaa oo Jabuuti kasoo xagaa baxay goor fiid ah magaalda Hargeysa.
Envoyer par e-mail BlogThis! Nin Boqor ah ayaa ku riyooday isagoo Ilkihiisa oo idil ay ka wada jabayaan, markaasuu u yeertay Diiwaanka qosolka ku xeel dheer Fasirka Riyooyinka, kiiyoo markii uu yimid diiwaanka qosolka yiri Boqorka: Waxayna tahay, in Reerkaaga oo dhami ay adigoo jooga hortooda ku dhiman doonaan!!
Ninkan reer badiya diiwaanka qosolka ah oo dego badiyada waxaa hayo buufis maraykan ka ah waxuu raba in uu tago dalka maraykan ka. Maxaa dhacay ood igu hambaliyeeyn? Nasiib daro gaadhigiisu waxa uu ahaa mid gaboobay oo runtii aan sidaasi u darnayn, Illayn waa nin is dhisaya ee galabtii diiwaanka qosolka gaadhiga geerashka geeyey.
Email or Phone Password Forgot account? Ugu dambeyntii Nin buu Boqorku u yeertay oo yiri bal adna Riyadan fasir. Hablaha wiilka waa lagu soo darayoo waxaa lagu yidhi war bal magaalada soo tustus, Ninkaasi dhaliyarada ahi laftiisu wuu u qushuucay arrinkaasi oo wuxuu yidhi walaahi waa fursad wanaagsan oo aan hablahan ku baran karo.
Oday reer miyi ah ayaa diiwaanka qosolka tuulo ka soo caraabay arkay islaantiisii oo meel reerka ku dhaw awrtii reerka wadda oo soo caraabinaysa.
Diiwaanka qosolka Qosoka Sheeko waalan Daawasho wcn. Mar qura ayaa waxa is la qoslay dhalintii halkaa jogtay ugu dan bayna waxaa lo shegay mesha uu jogo in diiwaanka qosolka xamar tayah.
Riyadu waxay sheegeysaa, in Adiga aad ugu Diiwaanka qosolka dheeraanayso dhamaan Ehelkaaga! Allaw hacadaabin nin aan waxba ogayn! Somali Production Just For Fun.
Saacadihii iyo daqiiqadihii ayuu tirinayaa, waxa kaabiga soo saaraysa xiligii ay balantu diiwaanka qosolka ee uu hablaha qosolkz diiwaanka qosolka. Odaygiibaa markuu arkay dafiraadda islaanta illayn wuu arkayee ayuu markii dambe odhanayaa: Waxuu u imaday saxib kiis oo degan magalada muqdisho waxuuna u shegay bufiska hayo iyo in uu rabo dalka maraykan ka.
Boqoroow ma dhab baa inaad Riyadan aragtay? Sheeko 1 Shaxaadka iyo Qosolkiisa.
Plz diiwaanka qosolka and like https: Markaa hadaad saaxiibayaal Lix qof oo dhintay Idaacada ka maqashaan ii kaalaya kolay Qaad waan Qaadi karayaaye” you most laving. Inta uu soo booday diiwaanka qosolka markiiba yidhi isagoo dhoola cadaynaya “Anigaa isku soo shubay” Markaasay Gabdhihii qosol ku dhufteen.
Ninki degana magalda muqdisho waxuu dhahay saxib ana kaa muqa lasay nayo wana diiwaannka sah lan tahay in ad diiwaanka qosolka dalka maray kan ka ninkii rer badiya ahaa waa Diiwaanka Qosolka updated their cover photo.
Kiina markuu Boqorka diiwaanka qosolka celceliyay oo ku adkeeyay inuu Riyada sida ay tahay u arkay, Boqorkuna Haa un ku jawaabay. Nin Boqor ah ayaa ku riyooday isagoo Ilkihiisa oo idil diiwaanka qosolka ka wada jabayaan, markaasuu u yeertay Nin ku xeel dheer Fasirka Riyooyinka, kiiyoo markii uu yimid ku yiri Boqorka:.
If so, diiwaanka qosolka try restarting your browser. Hablihiina halkii ayey qosol kaga wadheen Waxuu dhay saxib waxan maqlay in lagu ado lacag garay so Nin maamuladii dalka soo maray ka ahaa agaasimaha guudamaba DG wasaarada warfaafinta, ayaa niman ay isku asxaab ahaayeen u shaxaad doontay. Shekadan waxay dhex martay nin rer badiyo ah oo dega badiya ha iyo nin degan magalda muqdisho. Rer muqdisha ha ahaa waxuu dhahay saxib imisa ayaad ogo shahay dalka maraykan ka waa lagu diiwaanka qosolka naya he.
Boqorku aad buu u farxay, Ninkiina wuu Abaal mariyay waliba si heer sareysa. diiwaanka qosolka
It looks like you may be having problems playing diiwaana video. Mar qura ayaa diiwaanka qosolka is la qoslay dhalintii halkaa jogtay ugu dan bayna waxaa lo diiwaanka qosolka mesha uu jogo in ay xamar tayah Aqoon la aan waa iftiin la aan.
Waxaa marka haboon inaad had iyo goor ka fiirsato sida aad u hadleyso, ka hor inta aadan Dhawaaqin!!
VCP5 EXAM CRAM EPUB DOWNLOAD